I-NZD/USD yooVimba-Funda ukuRhweba
I-NZD / USD Flips Bearish ngoMvulo phakathi kweDola eyomeleleyo
I-NZD / i-USD ibini yangena kumjikelezo we-bearish kwiseshoni yokuqala yaseYurophu ngoMvulo, inikezela uphawu lwe-0.6800 njengoko ilahlekelwe ezinye zeenzuzo ezifunyenwe kwiveki ephelileyo.
Isibini se-forex asiphumelelanga ukwenza imali kwi-goodish bounce ukusuka kwiveki ephelileyo emva kokudibana nonikezelo olutsha malunga ne-0.6825 phezulu kwaye babanjwa yindibaniselwano yezinto ezisisiseko. Okokuqala, ukukhula kokungaqiniseki malunga nempembelelo yenani elandayo lamatyala e-COVID-19 kuphelisa ithemba ngokufunyaniswa kwamva nje kokuba ukwahluka kwe-Omicron kunokuba nzima njengoko bekukholelwa ngaphambili. Ngenxa yoko, ithintele umdla wabatyali-mali kwaye yasebenza njenge-ankile yeKiwi ethanda umngcipheko.
Oko kuthethiweyo, uluvo lwentengiso yomngcipheko, olubonakaliswe ngethoni ethambileyo ejikeleze iimarike ze-equity, lutsale ukungena kwindawo ekhuselekileyo kwi-greenback, ehlala ixhaswe yimbonakalo ye-hawkish Fed. Njengoko bekuxeliwe ngaphambili, i-US Federal Several igxininise kwintlanganiso yayo yokugqibela ukuba iceba ukuphumeza ubuncinane ukunyuka kwamazinga amathathu kwi-2022. Oko kwathiwa, i-USD enamandla nayo yandisa uxinzelelo lwe-bearish kwi-pair ye-NZD / USD.
Icala eliPhantsi eliPhantsi elinokwenzeka kwi-NZD/USD njengeMeko yeMarike yeNkxaso yeeBhere
Nangona kunjalo, i-downside eyongezelelweyo ye-NZD / i-USD pair ihlala ilinganiselwe phakathi kokungabikho kwabatyali-mali abazimisele ukubeka iibheji ezinobundlobongela njengoko sisondela ekupheleni konyaka. Kwakhona, ukungabikho kwayo nayiphi na imarike yokukhutshwa kwedatha yezoqoqosho kule veki ibe negalelo ekungabikho kokuguquguquka ukuqhuba amaxabiso kulo naliphi na icala.
Kungakhathaliseki ukuba, i-bias ejikeleze i-Kiwi isala ithambekele ekuthandeni iibhere, oku kuthetha ukuba isibini se-forex akunakwenzeka ukuba sirekhode i-push eqhubekayo ngaphezu kwe-0.6800 yeedola kwixesha elisondeleyo.
tags uhlalutyo, Forex, iindaba, NZD / USD
I-NZDUSD isetelwe ukuLahla i-Momentum yayo eBullish njengoko amaxabiso ethambekele ekutsaleni umva
Uhlalutyo lwamaxabiso eNZDUSD-Septemba 5
I-NZDUSD isetelwe ukuphulukana namandla ayo okuthengisa njengoko abathengisi beqhubeka nokongeza uxinzelelo ngakumbi kwintengiso. Kubekho utshintsho kwimarike njengoko amaxabiso eqala ukudibanisa phakathi kwamanqanaba abalulekileyo e-0.73160 kunye ne-0.71620. Ixabiso emva koko laqhekeka kwinqanaba elibalulekileyo le-0.71620, ebonisa ukuba iibhere bezilawula, ngaphambi kokubuyela umva kwinqanaba eliphambili lenkxaso le-0.69000.
Umda obalulekileyo weNZDUSD
Amanqanaba okumelana: 0.73160, 0.77060, 0.70650
Amanqanaba enkxaso: 0.68000, 0.69000, 0.71620
Ukulandela oko, i-NZDUSD yaqala ukudibanisa kwakhona. Nangona kunjalo, njengoko ixabiso liqokelelwe phakathi kwamanqanaba aphambili e-0.70650 kunye ne-0.69000, kukho umfutho omncinci phakathi kweenkunzi zeenkomo kunye neebhere kweli nqanaba. Imakethi emva koko yaqhekeka isezantsi, iqhubeka ne-bearish yayo ngaphambi kokubuyela phezulu. Emva kokubuyela umva kwindawo eyi-0.68000 ebalulekileyo, i-NZDUSD ngoku ithande ukunyuka. Ixabiso emva koko libonakala ngathi liphulukana nomfutho walo njengoko imarike ibonakala ngathi iyabuyela umva.
Nangona kunjalo, isalathiso seStochastic Oscillator kwitshathi yosuku olu-1 sibonisa umnqamlezo wegolide ongaphezulu kwenqanaba le-100. Oku kubonisa ukuba kubekho utshintsho kwicala lamaxabiso. Oku kungenxa yokwehla kokukhula ngamandla, kwaye ixabiso lisetelwe ukubuyela umva. Isibonisi se-MACD (Ukuhambisa umndilili wokuDibana kunye nokuDibana) sibonisa isiphithiphithi kuba imigca yesiginali ingaphezulu kwenqanaba le-zero. Oku kuthetha ukuba intengiso yangoku ye-bullish inokubuyela umva ngaphambi kokuphinda iqale ngamandla.
Imakethi icacile ngokucacileyo kwi-chart yeeyure ezingama-4, kunye nokuphakama okuphezulu kunye nokuphakama. Njengoko iinkunzi zenkomo ziqhubeka nokutyhala ixabiso liphezulu, iibhere zongeza uxinzelelo, zibangele ukubuyela endaweni. Njengoko i-histogram eluhlaza inyuka, umgca we-MACD uphakama ngaphezulu kwenqanaba le-zero. Kwingingqi ethengwe ngaphezulu, ii-Stochastic Oscillators ezingaphezulu kwe-100 zibonisa utshintsho kwicala lamaxabiso.
Ixabiso kulindeleke ukuba libuyele kwi-0.70650 njengoko imarike ilahlekelwa ngumfutho wayo.
tags Itshathi yemihla ngemihla, Ulindelo lweNtengiso, NZD / USD, Price Action, Uhlalutyo Technical
I-NZD / i-USD kwindlela esecaleni, inokuthi iqhubeke nokuThengisa uxinzelelo
NZD / USD kukuhamba phantsi. Nge-18 kaJuni, esi sibini siwele kwinqanaba eliphantsi le-0.6922 kwaye saphinda saqala ukuhamba ecaleni. Isibini semali besitshintsha phakathi kwe-0.6890 kunye ne- $ 0.7050 kwinyanga ephelileyo. I-Kiwi inokuthi iqhubeke ukwehla njengoko amaxabiso ehlaziya ukuya kwinqanaba le-0.7100.
Okwangoku, nge-18 kaJuni ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba imakethi iya kuwela kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le-0.6728.
I-Kiwi iwele kwinqanaba lama-46 kwi-Relative Strength Index ixesha le-14.Isibini sikummandla we-downtrend kwaye singaphantsi komgangatho ophakathi wama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ixabiso leKiwi lihamba ecaleni. Isibini sitshintsha phakathi kwenqanaba le-0.6940 kunye ne-0.70000. Ukuhamba kwamaxabiso ngoku kujongene nokwaliwa kwinqanaba le-0.7000. Iibini ziye zawa ngaphantsi kokuhamba okubonisa ukuhla kwehla.
I-NZD / i-USD ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sifikelele kwingingqi ethe kratya yentengiso. Abathengisi kunokwenzeka bavele ukutyhala amaxabiso ezantsi. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zijike ngokuthe tye zibonisa imeko esecaleni.
Isibini se-NZD / USD ngoku sihamba ecaleni. Iibini zemali ngoku zithengisa phakathi kwe-0.6890 kunye ne-0.7050 yeedola. Isibini sinokuwela kuluhlu lwamaxabiso asezantsi njengoko amaxabiso emivalo angaphantsi kwemilinganiselo ehambayo.
I-NZD / i-USD iqala kwakhona ngokuThengisa uxinzelelo, iinzame zokuPhula iNqanaba 0.6922
NZD / USD kukuhamba phantsi. I-downtrend yaqala kwakhona emva kokwaliwa kwinqanaba le-0.7300. Ukulandela ukophuka ngoJuni 18, iibhere azikaphuli inqanaba le-0.6922 kaJuni 18. Endaweni yoko, amaxabiso ebesoloko eguquguquka ngaphezulu kwezantsi. Ikhefu elingaphantsi kwelisezantsi elisezantsi liya kwandisa amathuba okwehla okungaphezulu. Okwangoku, nge-18 kaJuni ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba imakethi iya kuwela kwinqanaba le-1.618 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le-0.6922.
I-Kiwi iwele kwinqanaba lama-42 kwi-Relative Strength Index ixesha le-14.Isibini sikummandla we-downtrend kwaye singaphantsi komgangatho ophakathi wama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ixabiso leKiwi laqhekeka ngaphantsi komndilili oshukumayo wokuphinda uqhubeke nentshukumo esezantsi. Okwangoku, nge-9 kaJulayi ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba imakethi iya kuwela kwinqanaba le-2.618 yolwandiso lweFibonacci okanye inqanaba le-0.6732. Ukusuka kwisenzo sexabiso, i-Kiwi iwele kwinqanaba le-0.6949.
I-NZD / i-USD ingaphantsi kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sikwimeko ye-bearish. Isibini semali siwele kummandla ogqithisileyo wentengiso. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla ezantsi.
Isibini se-NZD / USD sihamba phantsi. Esi sibini siya kuba nentshukumo ekhawulezayo njengoko isaphula ngezantsi komndilili ohambayo. Ngokwesixhobo seFibonacci, isibini semali siya kuwa kwinqanaba le-0.6922 okanye le-0.6731.
I-NZD / i-USD kaMeyi inokuphinda iQalise ukuThengisa uxinzelelo, ukuLala ubuso kwiNqanaba 0.7037
NZD / USD kukuhamba phantsi. Isibini semali sijongane nokwaliwa kwi-0.73 yokuphikisa ngaphezulu. Umzekelo, nge-28 kaMeyi, i-NZD / i-USD pair yakhatywa njengoko i-downtrend yaqala kwakhona. Emva kokwaliwa, intengiso iyehla ukuya kwinqanaba le-0.6922 kwaye yalungiswa yenyuka.
Okwangoku, nge-18 kaJuni ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba imakethi iya kuwela kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le-0.6731.
I-Kiwi iwele kwinqanaba lama-43 kwi-Relative Strength Index ixesha le-14.Isibini sikwindawo ye-downtrend kwaye singaphantsi kwe-50. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zitshibilika ngokuthe tye zibonisa imeko esecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ixabiso leKiwi lenze uthotho lwezinto eziphantsi nezisezantsi. Nge-2 kaJulayi, iibhere zasilela ukophula isiseko esisezantsi kwinqanaba 0.6924 njengoko intengiso yalungisa yenyuka. Okwangoku, ngoJulayi 2 ezantsi; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba imakethi iya kuwela kwinqanaba le-2.0 Fibonacci extensions okanye kwinqanaba le-0.6807.
I-NZD / i-USD ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sikwindawo ekhulayo kodwa sifikelele kummandla weentengiso ogqithileyo. Ukunyuka kokunyuka kwemarike kunokwenzeka ukuba kwehle. Abathengisi kusenokwenzeka ukuba bavele kummandla othengwe kakhulu ukuba batyhale amaxabiso ezantsi. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zee-SMA zihle ziye ezantsi.
Isibini se-NZD / USD sinokuhla njengoko sijamelene nokwaliwa kwindawo ephezulu yamva nje. Ngaphandle koko, isibini sikwindawo ethengwe ngaphezulu kweemarike. Oku kuyakwenza ukuba isibini semali siwele kwicala elingelilo. Ngokwesixhobo seFibonacci, isibini semali siya kuwa kwinqanaba le-0.6807 okanye kwi-0.6731.
I-NZD / i-USD ayinakho ukuPhula iNqanaba le-0.7100, ukuthengisa uxinzelelo kunokwenzeka
Ukuhlaziywa: 28 Juni 2021
NZD / USD kukuhamba phantsi. Iibini zenza ukulungiswa phezulu. Ukulungiswa kujongene nokuchasana kwinqanaba eliphezulu. Okwangoku, nge-18 kaJuni ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba intengiso iya kuwa kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le-0.6731.
I-Kiwi inyukele kwinqanaba le-45 ye-Relative Strength Index ixesha le-14.Isibini sikwindawo ye-downtrend kwaye singaphantsi kwe-50. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zitshibilika ngokuthe tye zibonisa imeko esecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-Kiwi yalungisa phezulu kodwa ijongene nokwaliwa. Ukuba iwela ngaphantsi komndilili oshukumayo, uxinzelelo lokuthengisa luya kukhawuleziswa. Okwangoku, nge-18 kaJuni ezantsi; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba imakethi iya kuwela kwinqanaba le-2.0 Fibonacci extensions okanye kwinqanaba le-0.6607.
I-NZD / i-USD ingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sisantya se-bearish. Isibini semali sinokuhla. Okwangoku, ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zihlehla ezantsi.
Isibini se-NZD / USD silungisa ngaphezulu. I-Kiwi iya kuphinda ithengise uxinzelelo xa ijongene nokwaliwa kwindawo ephezulu yamva nje. Ngokwesixhobo seFibonacci, esi sibini sinokuwela kwicala elingelilo. Ukwehla kungenzeka kwinqanaba 0.6600 okanye 0.6700.
I-NZD / i-USD Falls kwi-Oversold Region, i-Uptrend inokwenzeka
Ukuhlaziywa: 21 Juni 2021
NZD / USD ikwisimo se-bearish. I-Kiwi ibekwe kumda ongaphantsi kwenqanaba le-0.7300 ukusukela ngo-Epreli. Ngomhla we-27 kaMeyi, esi sibini sagxothwa kwinqanaba 0.7311 njengoko iKiwi yawela kwinqanaba eliphantsi le-0.7125. Esi sibini senze ulungiso oluphezulu ukuya kwinqanaba le-0.7242 ngaphambi kokuphinda uqalise ukwehla. Okwangoku, nge-3 kaJuni ezantsi; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba imakethi iya kuwela kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye kwinqanaba le-0.6938. Ukusuka kwinqanaba lentengo, i-Kiwi iwele kwinqanaba leFibonacci. Ukunyuka okuphezulu kunokwenzeka.
I-Kiwi iwele kwinqanaba lama-32 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Isibini sisondela kwingingqi ethe kratya. Ngamanye amagama, i-Kiwi ifikelele kwi-bearish ukudinwa. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zijike ngokuthe tyaba zibonisa imeko esecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-Kiwi isezantsi. Iibhere ziye zaphuka ngaphantsi kwemilinganiselo ehambayo njengoko ukuthengisa uxinzelelo kuyaqhubeka. Okwangoku, nge-3 kaJuni ezantsi; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba imakethi iya kuwela kwinqanaba le-2.0 Fibonacci extensions okanye kwinqanaba le-0.6938.
Isibini singaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini siwele kummandla ogqithileyo. Abathengi kunokwenzeka ukuba bavele kwindawo ethe kratya. Okwangoku, ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zihamba phantsi.
Isibini se-NZD / USD sihamba phantsi. I-downtrend yangoku ifikelela kwi-bearish ukudinwa. Isixhobo seFibonacci sibonakalise ukudinwa kwendlela ye-bearish.
I-NZD / i-USD ibuye ngaphezulu kwenqanaba le-0.7120, ukutyhala ngaphezulu
NZD / USD kukuhamba ecaleni kwecala lokuhamba ngezantsi kwenqanaba 0.7300 ukusukela ngo-Epreli. I-Kiwi inyuka emva kokuwa kwinqanaba eliphantsi le-0.7115. Isibini semali sinomsebenzi wokunyuka ukuze siqhekeze ngaphezulu komndilili wokuhamba ukuze siqhubeke nokuhamba. Iibini zemali ziye zaguquka phakathi kwamanqanaba e-0.7150 kunye ne-0.7300 kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo.
I-Kiwi iwele kwinqanaba le-44 ye-Relative Strength Index period 14. Ibonisa ukuba isibini siwele kumda wendlela ye-bearish kwaye siyakwazi ukuwela kwicala elingaphantsi. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zijike ngokuthe tyaba zibonisa imeko esecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-Kiwi ikukuhla ezantsi kwenqanaba le-0.7300. Okwangoku, ngoMeyi 28 ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba imakethi iya kuwela kwinqanaba le-1.618 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le-0.7152. Isibini semali siphinde saphinda saphinda isandiso seFibonacci saphinda saqala ngaphezulu.
Iibini zingaphezulu kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ikwisantya esiphezulu. Isibini sele siwele kummandla ogqithileyo. Abathengi bayavela ukutyhala amaxabiso ezantsi. Okwangoku, ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zihlehla ezantsi.
Isibini se-NZD / USD siqale kwakhona phezulu. Iibini zikhuphuke zaya kwinqanaba le-0.7147. Abathengi baye bavela kwindawo ethe kratya. Iimarike zikulungele ukunyuka.
I-NZD / i-USD yoRhwebo kuLuhlu oluMxinwa njengoko ukuZithemba kweShishini kuyehla
I-NZD / i-USD- Idatha yezoqoqosho evela eNew Zealand yayisilela. Ukuthengiswa kwemveliso kunyuke nge-0.4 yeepesenti kwikota yokuqala yowama-2020, kulandela ukonyuka ngeepesenti ezi-0.4 kwikota yesine yowama-2020. Isalathiso sokuqala seshishini se-ANZ kaJuni sabonisa ukwehla kwamanqaku ama-2 kwithemba lokushishina ukuya kuthi ga -0.4 ekhulwini. Nangona kunjalo, isalathiso sicebise ukuba iimeko zeshishini kwisiqingatha sokuqala se-2021 zihlala zizinzile.
Uqikelelo lwamaxabiso emali lukwelona nqanaba liphezulu ukusukela ngoNovemba 2017, kwiipesenti ezi-2.3. Sibonile ukuba ukunyuka koxinzelelo lwamaxabiso e-US kuye kwaba sisihloko esiveleleyo kwiimarike, kwaye i-RBNZ ngokungathandabuzekiyo igcina iliso elibukhali koku kufunda, njengoko ukulindelwa kwamaxabiso kunokukhokelela kumanani okwenyuka kwamaxabiso. Injongo yokunyuka kwamaxabiso kwi-RBNZ luluhlu lwe-1% ukuya kwi-3%, yiyo loo nto iipesenti ze-2.3 zenqanaba liphezulu kuneyona njongo iphakathi.
Iingxaki zokubonelela okwethutyana zibekek 'ityala ngokunyuka kwamaxabiso. Nangona kunjalo, ukuba idatha yokunyuka kwamaxabiso iyaqhubeka nokunyuka, i-RBNZ, njengeFed, iya kucinezelwa ukuqinisa umgaqo-nkqubo.
Ukungabikho kokukhutshwa kwedatha ekumgangatho ophezulu kunye nophuhliso olusisiseko, ifayile ye Ixabiso le-US Dollar (DXY) iyaqhubeka nokuhamba ngaphakathi kuluhlu lwayo lweveki. I-DXY ngoku ithengisa nge-89.98, yehla nge-0.16 yeepesenti ngosuku, ivumela i-NZD / USD ukuba igcine izibonelelo zayo zemihla ngemihla zexeshana.
Idola laseNew Zealand (i-NZD / i-USD) ibuyela kwiZowuni yeMfuno
I-NZD / i-USD ifumana umhlaba njengoko umngcipheko wokutya uphucula ibhodi yonke. Kwitshathi yemihla ngemihla, esi sibini sifumene iibhidi ezinamandla kwindawo yokufuna (0.7120). Ukuqhawuka okulandelayo ngaphezulu kwe-0.7230 kubonisa ukuba kunomdla omkhulu ekuthengeni. Inqanaba lenkxaso ebalulekileyo yi-0.7140, ekufuneka igcinwe ukuze imeko yokuqhubela phambili iqhubeke.
I-RSI ibuyele kumhlaba ongathathi hlangothi, ivumela iliza elitsha lokuhlangana. Injongo elandelayo kwicala elingaphezulu iya kuba yi-0.7285, inqanaba lokuchasana elibalulekileyo. Uhola wendlela unokuvula ukuya ku-0.7400 ukuba wophuliwe.
Ukuthengiswa kwemveliso eNew Zealand kunyuke nge-0.4 yepesenti kwikota yokuqala, ngokwamanani akhutshwe kwangoko ngemini. Ngaphaya koko, i-ANZ Business Confidence Index yehle yafika -0.4 ngoJuni ukusuka nge-1.8 ngoMeyi, kodwa i-Activity Outlook Index inyuke yaya kwi-29.1% ukusuka kwiipesenti ezingama-27.1 kwangaxeshanye. Nangona kunjalo, ezi ziphumo zingqubanayo zazingenampembelelo ibonakalayo kwixabiso lentengiso le-NZD.
tags NZD / USD
I-NZD / i-USD ifikelela kuMmandla oThengisiweyo, ukuThengisa uxinzelelo kunokwenzeka
Ukuhlaziywa: 8 Juni 2021
NZD / USD kukuhamba ecaleni kwecala lokuhamba ngezantsi kwenqanaba 0.7300 ukusukela ngo-Epreli. Iibini zemali ziye zaguquka phakathi kwamanqanaba 0.7150 kunye no-0.7300. Namhlanje, imali inyukile kwaye yaphula ngaphezulu komndilili ohambayo. Oku kuyakuqhubela phambili ukunyuka kwamaxabiso kunye nokwaphula amanqanaba oxhathiso.
I-Kiwi ikwinqanaba lama-51 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Ibonisa ukuba kukho ulungelelwaniso phakathi konikezelo kunye nemfuno. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zijike ngokuthe tyaba zibonisa imeko esecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-Kiwi ikwindlela esecaleni kumgangatho ongaphantsi kwe-0.7300. Okwangoku, nge-7 kaJuni uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba imakethi iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.272 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba eliphezulu le-0.7267 kwaye ibuye umva.
NZD / USD -4 Itshathi yeYure
Iibini zingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ikwisantya esiphezulu kwaye ifikelele kummandla othengiweyo wentengiso. Abathengisi banokuvela batyhalele amaxabiso ezantsi. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zijike ngokuthe tyaba zibonisa imeko esecaleni.
Isibini se-NZD / se-USD siboshwe kuluhlu olungezantsi kwe-0.7300 yokuphikisa ngaphezulu. Isibini semali siyatshintsha phakathi kwenqanaba le-0.7150 kunye ne-0.7300. Amaxabiso angawa njengoko isibini semali sifikelela kummandla ogqithileyo